Famous People with Sarcoidosis - SarcoidosisUK
ဤစာမျက်နှာကို sarcoidosis ခဲ့ကြသူအချို့လူသိများတဲ့လူများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါရှိသည်။ ဝီလျံရှိတ်စပီးယားနှင့် Ludvig van Beethoven လည်း sarcoidosis ခဲ့ကြောင်းထင်ကြေးရှိပါသည်။
Bernie ရဲ့ MAC
လူရွှင်တော်, အမေရိကန်, 1957-2008
Bernie Mac ကိုတစ်ဦးအမေရိကန်လူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင်နှင့်အသံဖြင့်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက 25 နှစ်များအတွက်အဆုတ် sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အဆုတ်ရောင်၏ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ 2007 ခုနှစ်တွင်သူသည်စတင် Bernie Mac အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
အမေရိကန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Player ကို, အမေရိကန်, 1961-2004
Reginald Howard White က 1980 နဲ့ 1990 ခုနှစ်ကာလအတွင်း 15 ရာသီများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသမိုင်းအတွက်အများဆုံးချီးမြှင့် NFL ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသူ့မသေမှီနှစ်ပေါင်းများစွာအဆုတ်နှင့်နှလုံး sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။
ရှငျဘုရငျ Willem-Alexander ဟာ 1990 ခုနှစ်မှာအသက် 30 ဧပြီ 2013 ရက်နေ့တွင်ဒတျချြရာဇပလ္လင်သည်အမိကိုဆက်ခံသူသည်မိမိအနှစ်လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ခဲ့သည့်အခါ, sarcoidosis တစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆေးဝါးကုသမှုစစ်ဆေးမှုများ-Up ကာလအတွင်းကသူ့အဆုတ်ထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာမကုသဘဲပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Actress, presenter and producer, UK, 1974-
Emilia Fox is an English actress, present and producer. Diagnosed with sarcoidosis at the young age of 18, she has since leadasuccessful career including starring in The Pianist.
Comedian, actor, author and recording artist, UK, 1952-
Alexei Sayle was voted the 18th greatest stand-up comic of all time on Channel 4’s 100 Greatest Stand-ups in 2007. Originally diagnosed with sarcoidosis 30 years ago, he hadaflare up in 2020 but has been using steroids to manage symptoms.
Floyd MAYWEATHER Sr;
လက်ဝှေ့သမားနဲ့သင်တန်းပေးသူ, အမေရိကန်, 1950-
Floyd Mayweather Sr; 1990 မှ 1974 ကနေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတစ်ဦးကိုယခင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ဝှေ့သမားဖြစ်ပြီး, ကတည်းကလက်ဝှေ့သင်တန်းဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ သူဖခင်နှင့်သူအဆုတ် sarcoidosis ခံစားခဲ့ရထားပါတယ်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ Floyd Mayweather ဂျူနီယာဟောင်းမှသင်တန်းဆရာဖြစ်ပါတယ်။
Tisha Campbell-Martin isafamous actress staring in many movies and Television series, including ‘Martin’ and ‘My Wife and Kids’. She was diagnosed with pulmonary sarcoidosis over3decades ago and has been living with it ever since.
စာရေးဆရာ, မော်ဒယ်နှင့်မင်းသမီး, 1962-
ကရင် "Duff" Duffy တစ်ဦးအမေရိကန်စာရေးဆရာ, မော်ဒယ်, ရုပ်မြင်သံကြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ 1995 ခုနှစ်တွင် Duffy neurosarcoidosis နှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. သူမ sarcoidosis နှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်အတူနေထိုင်နေသူမအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုနှစ်ခုစာအုပ်တွေကျမ်းစာ၌ရေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများသတင်းထောက်, အမေရိကန်, 1983-2017
ယောသပ်သည် Rago အကောင်းဆုံး The Wall Street Journal မှာမိမိအလုပ်အတွက်လူသိများနေတဲ့ပူလစ်ဇာဆု-အနိုင်ရအမေရိကန်နိုင်ငံရေးစာရေးဆရာ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာ 2017 ခုနှစ် sarcoidosis ပြဿနာများကနေသေဆုံး ..
Dermatology Assistant, USA, 1958-
Deborah Jeanne Rowe is an American woman, known for her marriage to Michael Jackson, with whom she had two children. In 2014 she hadacancer scare which turned our to be sarcoidosis.